Android နှင့် TV ချိတ်ဆက်နည်း Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » တီဗီမှအန်းဒရွိုက်ချိတ်ဆက်ပါဖို့ကိုဘယ်လို
ဒီ post သင့် TV မှသင့်ရဲ့ Android device ကိုဆက်သွယ်၏ခြေလှမ်းများကတဆင့်သင်ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးအများကြီးပိုကြီးတဲ့ screen ပေါ်မှာ, သင့် TV ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ Android device အတွက်သင်၏ဓါတ်ပုံများ, ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုလက်ရှိတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏တီဗီမှသင့်ရဲ့ Android device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ MHL / SlimPort သို့မဟုတ် Micro-HDMI cable ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်း Chromecast ကိုသို့မဟုတ်အခြားအလားတူ options များသုံးပြီးသင့်ရဲ့ screen ကို ချ. ကြိုးမဲ့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ သင်ဖုန်းခေါ်အပေါ်နေစဉ်သင်ပင်သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းကိုချပစ်နိုင်သည်ကိုသိပါသလား? Tablet နဲ့ဖုန်းတွေသငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုပြုခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းပေါ့ပါးခြင်းနှင့်ခရီးဆောင်များမှာပါစေနေချိန်မှာသင်ကမိသားစု get-အတူတကွသို့မဟုတ်ကျော်လာမယ့်မိတ်ဆွေများအုပ်စုရှိပါက, တီဗီရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တစ်ခုက Android device ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းတစ်ခုမှာကောင်းသောအရာကိုသင်တီဗီကဆက်သွယ်နိုင်သည်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါပဲ။ Miracast သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်သင် connect လုပ်ချင်တဲ့နှစ်ခု devices များအကြားတစ်ခုကြော်ငြာ-hoc network ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ကြိုးမဲ့စံဖြစ်ပါတယ်။ ပို. ပို. တီဗီယခု Miracast ထောက်ပံ့နေကြသည်နှင့်တူများအတွက်မည်သည့်အပိုဆောင်းဟာ့ဒ်ဝဲမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် H.264 ကိုအသုံးပြုချိန် မှစ. ၎င်း၏ချုံ့အကျိုးရှိစွာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသင် YouTube နှင့် iPlayer ထံမှပစ္စည်းပစ္စယ stream မှအသုံးပွုနိုငျသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငြ့်အရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုကျေးဇူးတင်စကားထောက်ခံပါတယ်။
Chromecast ကို google ဒီအတှကျအကောငျးဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအများကြီးကုန်ကျပါဘူးအလွယ်တကူတစ်အားလပ်ချိန်မှာ HDMI port သို့ပလပ်နိုင်ပါသည်။ ဒါအပေါ် Netflix, BT အားကစား, iPlayer နှင့်ထံမှအကြောင်းအရာထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။ Chromecast ကိုဤနေရာတွင်လူအပေါင်းတို့သည်မိုးသည်းထန်စွာအလုပ်မပြီးကတည်းက, သင်သည်သင်၏ဘက်ထရီမကြာမီချွတ်ဝတ်ထားစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ Android device ကိုရဲ့ display ကို mirror ဖို့ Chromecast ကိုသုံးနိုင်သည်။
တီဗီမှအန်းဒရွိုက်ချိတ်ဆက်ပါဖို့ကိုဘယ်လို - HDMI
HDMI ပါသို့မဟုတ် High Definition မာလ်တီမီဒီယာ Interface ကိုစံ interface ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယခုအားလုံးဂိမ်း consoles စ, Laptop, ကင်မရာများနှင့် set-top box တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်စျေးကြီးသည်မဟုတ်, ထိုသို့တစ်ပြိုင်နက် HD ဗီဒီယိုနှင့်အသံနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ HDMI output အနေနဲ့ Apple ကတဦးတည်းကိုကျော်တစ်ဦးက Android device ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျ HDMI ပလပ်သုံးအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ် - ပုံမှန် HDMI သို့မဟုတ် Type A, Mini ကို HDMI သို့မဟုတ်အမျိုးအစားကို C, ဒါမှမဟုတ်မိုက်ခရို HDMI သို့မဟုတ်အမျိုးအစားဃဤရွေ့ကားကိုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးအလွန်လျော့နည်းကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ တဦးတည်းကိုအဓိကအားနည်းချက်အားလုံးမဟုတ်တက်ဘလက် HDMI output ရှိသည်နှင့်ဖုန်းများပေါ်မှာအလွန်ရှားပါးတဲ့သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
တီဗီမှအန်းဒရွိုက်ချိတ်ဆက်ပါဖို့ကိုဘယ်လို - SlimPort MHL
အဆိုပါ MHL ဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်း High Definition Link ကိုကစားသို့ကြွလာနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ ဤသည်ကို Android device ကိုပိုင်ရှင်တွေကသူတို့သည် micro USB port ကိုကနေတဆင့်အခြားအပြသမှုကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ SlimPort နှင့် MHL တော်တော်လေးဆင်တူကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတူတူပင်ရည်မှန်းချက်ကမ်းလှမ်းရန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပတ်လည်အသံရှစ်လိုင်းများနှင့်အတူထောက်ခံမှုအသံနှင့်ဗီဒီယိုနှစ်ဦးစလုံး။ သူတို့ကိုထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်, သင်ထိထိရောက်ရောက် signal ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုတီဗီနှင့်သင့် device ကိုအကြားတစ်ဦး dongle လိုအပ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကသာအနည်းငယ်ပို
တီဗီကာစ် - ...
Connect ကို Drive ကို
AT & T က Connect ကို